Monday November 27, 2017 - 11:29:39 in Wararka by
Dad Badan ayaa laga yaabaa in ay rumeysan waayaan in caalamka casriga ah laga heli karo waddan uu kajiro is addoonsigii qarni ka hor adduunka laga dabar jaray.
Wadanka Liibiya ee dhaca waqooyiga Qaaradda Afrika waxaa ka furan suuq dadka lagu iibiyo sida xoolaha oo kale arrinkaas oo ka yaabiyay malaayiin qof oo caalamka ku nool, magaalooyin Liibiya katirsan waxaa kuyaal suuqyo si caadi ah loogu iibiyo Bani'aadamka!.
Nidaamka is addoonsiga ayaa Liibiya kajira, kumanaan qof rag Afrikaan ah ayaa qaab is addoonsi ah loogu iibiyaa suuqyada, Video lagasoo qaaday mid kamida suuqyada ganacsiga Addoomada waxaa kasoo muuqanayay dhalinyaro Madoow ah oo lacago kumanaan kun dollar ah lagu iibsanayo.
Dad ku lug leh ka ganacsiga addoomada ayaa warbaahinta u sheegay in nidaamkan uu hadda caadi ka noqday wadanka islamarkaana addoomada la iibsado ay qabtaan shaqooyin ay kamid yihiin fallidda beeraha, xoola ilaalinta iyo in ay ka shaqeeyaan dhismayaasha iyo shaqooyinka adag iyagoo aan wax xuquuq ah laheyn.
Wariye katirsan Telefeshinka CNN ayaa muuqaal qarsoodi ah kasoo qaaday mid kamida suuqyada lagu iibiyo addoomada wuxuuna soo bandhigay codka dad sidii xoolaha oo kale loo kala baayacsanayo.
Halkan Guji si aad u daawato Video-ga ama hoos ka daawo
Dhageyso Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Dilka Taliyihii 12 April & Dhacdooyin Kale.